बलात्कार गर्दै हिड्ने पिपासु भन्दा,बाथरूममा हस्तमैथुन गर्ने पुरुष महान! (भिडियो सहित हेर्नुहोस) – Complete Nepali News Portal
बलात्कार गर्दै हिड्ने पिपासु भन्दा,बाथरूममा हस्तमैथुन गर्ने पुरुष महान! (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
ScotNepal March 23, 2018
सगरमाथाकी छोरीको नाममा सामाजिक संजालमा चर्चित सावित्रा सुवेदी एक नारीवादी महिला हुन् । उनको ‘जयनारी’ सामाजिक संजालमा उत्तिकै चर्चामा छ ।
नारि बिशेष मुद्दाहरुमा जोडिएर नारि मुक्ति अभियानमै क्रियासिल देखिने सावित्री सुवेदी खुल्ला र स्पस्ट बक्ताको रुपमा चिनिन्छिन । पछिल्लो समय महिलामाथि हुने नारि हिंसा बिरुद्द खुलेर निर्धक्क बिरोधका आवाज बुलन्द गर्ने ‘जयनारी’ हुन् ।
बोक्सी पर्थाको चपेटामा पिल्सिएका नारि देखि बलात्कारका जघन्य अपराधहरुलाई सजाय दिलाउने अभियानमा खुलेर लागेकी युवा महिला सावित्री सुबेदीले हरेक बखत महिलाहरु पुरुषद्वारा बलात्कारको शिकार भैरहदा बलात्कारीलाई फाँसी दिलाउने अभियानको कसरतमा छिन ।
आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा एउटा नारा राखेकी छन् ‘एकजुट भै भनौ बलात्कारीलाई फाँसी दे….’
यसै प्रसंगमा सुबेदीले आफ्नो फेसबुकमा रमाइलो तर्क गरेकी छन् ‘बलात्कार गर्दै हिड्ने पिपासु भन्दा, बाथरूममा हस्तमैथुन गर्ने पुरुष महान’ हुन् । उनको यो फेसबुक स्टाटस धेरैले मन पराएका छन्, लाइक कोमेन्ट पनि बढी रहेको छ ।
वेलायत: रंगभेद तथा जातीय विभेदविरुद्ध रणनीति बनाउने समितिमा नेपाली शिवजी...
संसारलाई ढाकेको अदृश्य कालो बादल : कोरोना भाइरस
News 24 छोडेपछि अब रबि लामिछानेले के गर्नुहुन्छ ?
चिहान खन्ने झाँक्रीको पर्दाफास (भिडियोसहित)
अस्ट्रेलिया: ग्रेटर जिलोङ नेपलिज कम्युनिटिद्धारा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता...
महलका झलमल ज्योति देखि, दियालॊको बस्ति बस्तीमा !